साहित्य | Nepal Desh | Page 2
सक्षम नारीका गुण
१३ भदौ, काठमाण्डौं । निता जोशी एक नारीले आफुलाई आत्मस्वाभिमानी ठान्नु एउटा गौरवको कुरा हो, सदा आँफै जान्ने सम्पूर्ण कुरामा निपुण ठान्नु एउटा गलत धारणा हो । एक शिक्षित नारिले कार्यालयमा, पदमा...	Read more
“अन्धकारको यात्री” कविता संग्रह लोकार्पण
काठमाडौं, भदौं १२ । पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालको दोश्रो कविता संग्रह अन्धकारको यात्री सार्वजनिक भएको छ । यसअघि ०५९ मा सांध कविता संग्रह प्रकाशित भएको थियो । ०४३ मा केही कवि केही कविता मार्फत स...	Read more
टुकनाथ भुसाल गुरुहरु अभिवादन ज्ञानका पुञ्जलाई । सतगुण र विवेकले भरिदियौ लोकलाई । सजन सरी तुल्यायौ प्रेमले मूर्खलाई । अझ पनि तिमीलाई कत्ति छैन थकाई ।।१।। दुःख गरिकन ज्ञानी पार्छु बालक् भनेर ।...	Read more
छर्यौ कान्ति जसै सहस्र रविको ….
टुकनाथ भुसाल हे भानु तिमी राष्ट्रका र जनका भाषा अनि ज्ञानका । पिता वाङ्मयका नेपाली मनका गौरव अनि शानका । नक्षत्रै नभका सदा गगनमा चमचम गरी चम्कने । तिम्रै भाव अनि प्रेरणा र बलले भाषा अघि लम्क...	Read more
लुकेर प्रहरीको ज्यादतिको भिडियो खिच्ने कवि सायमी पक्राऊ
२९ जेठ, काठमाडौं । देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेका वेला कम्युनिस्ट विचारलाई समर्थन गर्ने प्रगतिशिल कवि स्नेह सायमीलाई नै प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । शनिबार बिहान ढुङ...	Read more
‘के यी ‘घर’हरू हुन् ?’ (लघुकथा)
खेमराज पोखरेल मैले आमा बाबुले भनेको मानिन । अर्को जात बिहे गरेँ । ‘घर’बिहीन भएँ । ००००० हामी दुई जोई पोइको मिल्ती देखेर सासू ससुराले भनेको सुनेः ‘हाम्री सानी भाग्यमानी रहिछे राम्रो ‘घर’ पर्य...	Read more
प्रगतिशील लेखकको संघको अध्यक्षमा पोखरेल
२९ चैत, काठमाडौं । प्रगतिशील लेखकहरुको साझा संगठन प्रगतिशील लेखक सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार राति सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले प्राज्ञ मातृका पोखरेलको अध्यक्षतामा संघको नयाँ...	Read more
मुस्किलले बाँचियो ! थ्याङक्स गड !!
खुम रेग्मी/युएई केही कल्याङ-बल्याङ अनि फासफुस आवाजले मेरो निद्रा भंग भयो । बिहानिको नौ बजिसकेको रहेछ । आज टन्नै सुत्न पाएको छु एक हप्ता पछिको पर्खाइमा । सुक्रबार ! आज मेरो छुट्टीको दिन । AC...	Read more
हिटलरको संसदमा नेपाली साहित्यकार
४ भदौ । नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तको नेतृत्वमा साहित्यकारको टोली यतिवेला जर्मनी पुगेको छ । युरोप भ्रमणका क्रममा रहेको साहित्यकारको टोली जर्मनको ऐतिहासिक स्थल बर्लि...	Read more
नयनराज पाण्डे बिहान साढे आठ बजेसम्म उसको छोरो एकदम ठीकठाक थियो । गए राति एघार बजे अलिअलि पेट दुख्यो मात्र भन्दै थियो । तैपनि राति बाह्र बजेसम्म ऊ निदाइसकेको थियो । छोरो निदाएपछि साढे बाह्रति...	Read more